Musharax aan la fileynin oo laga yaabo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharax aan la fileynin oo laga yaabo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha (AKHRISO)
Waxaa saacadihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka soconaayay ololihii ugu dambeyay oo ay kala wadaan musharixiinta ku tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoona xilliga ay doorashadaasi bilaaban laheyd ay ka harsan yahay oo kaliya in ka yar muddo 24 saacadood ah.
Illaa 23 musharax ayaa ku tartami doonno doorashadaas, waxaana musharixiinta ugu cad-cad ka mid ah musharax uu ka mid yahay C/laahi Cosoble Cali, kaas oo haatan ololahiisa si weyn looga dareemayo magaalada Muqdisho.
Musharax C/laahi Cosoble Cali oo ka mid ah 23-ka musharax ee loo saadaalinaayo inuu ku guuleysan doonno doorashada ayaa la sheegayaa inuu haatan kulamo kala duwan oo aan joogsi laheyn magaalada Muqdisho kula yeelanayo xildhibaano tiradooda kor u dhaafeyso 100 xildhibaan.
C/laahi Cosoble Cali ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu ka mid yahay musharixiinta loo saadaalinaayo inuu usoo gudbo wareega labaad, maadaama goobtaasi laga filan karo in musharaxiinta waxqabadkooda hore loo tijaabiyay ay hankooda siyaasadeed daaqada ka baxaan.
Siyaasigaan maal-qabeynka ah C/laahi Cosoble Cali ayaa la xasuustaa in sanadii 2012-ka uu ka mid ahaa musharixiinta ugu cad-cadayd ee ku tartameeysay xilka madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna xilligaasi musharaxaan usoo gudbay wareegii labaad, inkastoo markii dambe uu tanaasul sameeyay.
Dadka sida weyn u falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan sheegaya in musharax C/laahi Cosoble Cali laga yaabo inuu ku guuleysto tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo dhici doonto maalinta berri oo Arbaco ah.
Inkastoo la filan karo in siyaasi kale isbadel doon ah islamarkaana hore xil uga soo qabtay dalka uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadane waxaa hubanti ah in rajadda madaxweynaha haatan taladda haaya Xasan Sheekh Maxamuud ay aad u yartahay inuu doorashada markale ku guuleysto.
Dhinac kale, xiriiro kala duwan aynu la sameeynay dhowr xildhibaan oo ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegaya inta badan xildhibaanada labada Aqal ay haatan maskaxda ku haayaan inay codadkooda siiyaan musharax C/laahi Cosoble Cali.
Si kastaba ha ahaaatee, illaa iyo haata si rasmi ah looma saadaalin karo cidda rasmiga ah ee kusoo bixi doonto doorashada dhici doonta maalinta berri, inkastoo tiro xildhibaano kale oo iyagane isbadel doon ah ay qorsheynayaaan in codadkooda ugu shubaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ama Maxamed C/laahi Farmaajo.